Banky iraisam-pirenena sy Rosia Sonia Fifanarahana findramam-Bola noho ny ny Faharoa-Pirenena Hydromet Rafitra Maoderina Tetikasa - Ny mpisolovava rehetra ao Rosia! Ny lehibe indrindra mpisolovava vavahadin-tserasera.
Banky iraisam-pirenena sy Rosia Sonia Fifanarahana findramam-Bola noho ny ny Faharoa-Pirenena Hydromet Rafitra Maoderina Tetikasa
Maneho hevitra sy mifandray amin ny manam-pahaizana
Jereo ny Lohataona Fivoriana fampandrosoana ny zava-mitranga avy AprFandaharam-potoanan'ireo Hetsika ao MOSKO, janoary - Ny Fifanarahana findramam-Bola noho ny ny Faharoa-Pirenena Hydromet Rafitra Maoderina Tetikasa (Roshydromet-), vola avy amin'ny IBRD findramam-bola, dia efa nanao sonia ny amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny Alexander Frolov, lehiben'ny Federaly asa Fanompoana amin'ny Hydrometeorology sy ny tontolo Iainana ny fanaraha-Maso ao amin'ny Federasiona rosiana, ary Michal Rutkowski, Talen'ny Banky mondialy any sy ny Mponina Solontena any Rosia. Ny findramam-Bola, Fifanarahana voasonia araka ny Governemanta ao anatin'ny Federasiona rosiana ny Torolalana mitarika ny Federaly rosiana ny asa Fanompoana amin'ny Hydrometeorology sy ny tontolo Iainana ny fanaraha-Maso mba ho azo antoka ny fanatanterahana ny tetikasa.
Ny fitambaran'ny tetikasa cost dia US$
Tamin'ny septambra, izao Tontolo izao Banky Vondrona ny Birao Mpanatanteraka Tale fankatoavana ny US$ tapitrisa amin'ny findramam-bola ho mpiara-bola ny Faharoa-Pirenena Hydromet Rafitra Maoderina Tetikasa (Roshydromet-).
tapitrisa, anisan'izany ny US$.
tapitrisa earmarked ao anatin'ny Federasiona rosiana ny Vahiny Nindrana Fandaharana. Ny tena tanjon'ity tetikasa ity dia ny hanampy ny Federaly rosiana ny asa Fanompoana amin'ny Hydrometeorology sy ny tontolo Iainana ny fanaraha-Maso mba hanatsarana bebe kokoa ny-pirenena ny fahaiza-manao mba hanafaka azo antoka sy ara-potoana ny toetr'andro, rano ao amin'ny faritra sy ny toetr'andro ny vaovao ny olom-pirenena rosiana, isam-paritra sy monisipaly ny fitondram-panjakana, sy ny sehatra miankina amin'ny toetr'andro, rano, sy ny toetrandro. Izany koa foster firenena ny fahafahana mampiditra ao amin'ny global rafitra ara-toetr'andro ny asa. Ny tetikasa ny asa dia ho ampiharina amin'ny taona, mba."Ny tanjon'ny tetikasa dia ny mba hahatanteraka ny tsy mitsaha-mitombo ny fangatahana avy amin'ny teny rosiana ny fanjakana sy ny fiaraha-monina ho an'ny hydrometeorological vaovao. Izany dia manampy ihany koa ny adiresy ao amin'ny fomba ara-potoana amin'izao fotoana izao ny zava-tsarotra mifandraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny hampitombo ao amin'ny onjam-peo sy ny halehiben'ny loza ara-boajanahary"hoy i Alexander Frolov. Ny tetikasa dia ny fitantanam-bola ny fampiasam-bola amin'ny fahaiza-manao fanorenana fotodrafitrasa rafitry ny hanatsara, sy ny kalitaon'ny asa fanompoana delivery.
Ny tetikasa dia singa telo: Ny tetikasa mameno ny vokatry ny voalohany-Pirenena Roshydromet Toetr'andro Tetikasa bebe kokoa ny fanohanana ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fanaraha-maso.
Izany dia hanampy Roshydromet amin'ny fanatrarana ny tapaky ny volana-teny maoderina tanjona napetraky ny Governemanta rosiana ao amin'ny Paik'ady ho an'ny Asa atao any Hydrometeorology sy Mifandraika amin'ny Faritra mandra- (amin'ny fiheverana ny fiovan'ny toetrandro). Ny tetikasa dia hanampy mba hanamafy bebe kokoa ny rano ao amin'ny faritra tambajotra sy ny tolotra, mihoatra ny isan-jato ny tambajotra maoderina, tao amin'ny mazava ho azy fa ny voalohany tetikasa, ary manatsara ny rafitra vaovao ho an'ny toetrandro, toetrandro, sy rano ao amin'ny faritra famantarana."Ny tetikasa dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana maharitra sy mahomby ny fiarovana nasionaly ny toe-karena sy ny ain'ny olombelona avy tafahoatra toetrandro mikasika ny loza. Izany dia hanampy ihany koa, mba hanamafy orina Rosia ny fandraisana anjara ato amin'ny global-bahoaka entana, ary koa ny anjara asany ao amin'ny Tontolo ara-toetr'andro Fikambanana sy vondrom-paritra mpitarika"hoy Michal Rutkowski. Tsy maintsy kitihina amin'ny rohy ny pejy fa tsy ny ampahany amin'ny dikan-beta ny vaovao rosiana Banky Mpisolovava. Alohan'ny miala, te fitiavana isika mba hahazoana ny tamberina momba ny zava-nitranga raha ianao no eto. Dia maka roa minitra mba hamenoana fohy fanadihadiana izay hanampy antsika mba hanatsarana ny vohikala? Misaotra anao nanaiky ny hanome ny tamberina momba ny vaovao dikan-teny rosiana ny Banky Mpisolovava ny valiny dia hanampy antsika mba hanatsarana ny vohikala. Misaotra anao noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanadihadiana ity! Ny fanamarihana dia tena manampy antsika raha toa ka miasa mba hanatsarana ny site-miasa amin'ny rosiana ny Banky Mpisolovava.
Rosiana ara-dalàna ny fikambanana rosiana Mpisolovava
Nueva Realty Ley de Registro de entrada en Vigor